ချာခ်မွား လူမျိုးဆိုတာ သက်လူမျိုး မလေး အရုပ်ပေါက်တယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« In 1429, Arakan was invaded by Wali Khan, the commander in chief of twenty thousands Pathan Force of Nazir Shah of Bengal and he made Narameikhla, the exiled king of Arakan
Thet People, the origin of Myanmar Race is pushed away to Bengladesh and periphery of Myanmar »
ချာခ်မွား လူမျိုးဆိုတာ သက်လူမျိုး မလေး အရုပ်ပေါက်တယ်
Jack Marson: ချာခ်မွား လူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျသံအမတ်
ချာခ်မွား လူမျိုးဆိုတာ သက်လူမျိုးကို ခေါ်တာ..သူတို့ အသားတွေဖြူပြီး ဗုဒဘာသာ ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ မလေး အရုပ်ပေါက်တယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ပြောကြတယ် မလေးလူမျိုးဆိုတာလည်း အဲဒီ ချာ်မွားလူမျိုးဘဲတဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းက ပသျူးတွေနဲ့ တူကြတယ်။
မြန်မာပြည်က ပသျူးလူမျုိးတွေကို မလေးမှာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်နဲပ သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံသား ပေးတာ ရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည်က ချာခ်မွား လူမျိုးတွေကတော့ ဗုဒဘာသာကိုးကွယ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုထဲမှာ ရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျမှာလည်း အဲဒီ လူမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျမှာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ချာခ်မွား လူမျိူး နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ပါကြတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ သံအမတ် ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ သံအမတ်က ချာခ်မွားလူမျိုး ဗုဒ ဘာသာဝင်ဘဲ။ ရခိုင်တွေနဲ့ အချိတ်အဆက်ရှိတယ်။
The Chakmas are the largest tribe of Bangladesh. The Chakmas are of mixed origin but reflect more Bengali influence than any other tribe. The Chakmas generally lived in the highland valleys. Most Chakmas are Buddhists, but some practice Hinduism or animism.
The Chakmas ( Chakma or ), also known as the Changma (চাংমা), areacommunity that inhabits the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and the North-East India. The Chakmas are the largest ethnic group in the Chittagong Hill Tracts, making up more than half the tribal population. Chakmas are divided into 46 clans or Gozas. The Chakma has their own language, custom, culture, and profess Theravada Buddhism. The chakmas are so good in heritage and culture and found mostly in India and Bangladesh and have their own script.and some chakmas population are inhabiting in china and Burma(mayanmar) and also in Thailand.
Tags: Bangladesh, Burma, Chakma, Chakma people, Chittagong Hill Tracts, Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Hinduism, India
This entry was posted on December 26, 2013 at 7:04 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.